Ɔsԑmpaka – 4Jehovah (Yehowa)
So apam foforo no yɛ nnipakuw 144000 pɛ?
SO APAM FOFORO NO YԐ NNIPAKUW 144000 PԐ? Nsɛmmisa 15 a wobebisa Yehowa Adansefo fa Nnipa 144000 no ne Nnipakuw Kɛse no ho
Gyidi nsɛmti ahorow nyinaa a obi betumi ne Yehowa Adansefo besusuw ho no, biribiara nni ho a ɛsom bo kyɛn Yesu Kristo Nipa ko a ɔyɛ ne nkwagye ne daa nkwa ho nsɛm nsɛm. Yehowa Adansefo wɔ nkwagye akuw abien nhyehyɛe a ɛno mu na woakyekyɛ wɔn akyidifo mu akuw abien. Wɔfrɛ akuw a edi kan “nguankuw ketewa” a wɔyɛ nnipa dodow 144000 na afei kuw a ɛto so abien no wɔfrɛ no “nnipakuw kɛse” wɔyɛ adessama dodow a aka nyinaa. Saa wohwehwɛ nea wɔgye di fa akuw abien nkwagye nhyehyɛe mu a, ɛbɛda adi sɛ mfomso kɛse wɔ Ɔwɛn Aban nkyerɛkyerɛm efisɛ Kyerɛwnsɛm nkyekyem biako mpo mfoa wɔn adwene soronko a ɛfa asɛm yi ho. Continue reading “So apam foforo no yɛ nnipakuw 144000 pɛ?”
Author WebmasterPosted on April 29, 2013 April 30, 2013 Categories Nsԑmmisa ԑkɔ ma Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags 144000 Kuw a Wɔasra wɔn, Nkwagye, Owu Akyi Asetena, Owusɔre, Ɔsoro, Paradise ne Ahenni no
Author WebmasterPosted on February 21, 2013 February 21, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Harmagedon ne Awie No, Nkwagye, Paradise ne Ahenni no
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 20, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Nipakō Yesu Kristo yɛ, Nyankopɔn Baasakoro No, Woredɔ Yehowa
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 20, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Mpaebɔ ԑkɔ Yesu nkyԑn, Nipakō Yesu Kristo yɛ, Nkwagye, Woredɔ Yehowa
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 21, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags 144000 Kuw a Wɔasra wɔn, Nkwagye, Paradise ne Ahenni no, Woredɔ Yehowa
“Enti mma bebree na wɔde wɔn aba anuonyam mu wɔ soro a wɔn dodow yɛ 144001 pɛ,-Yesu ne ne Honhom fam anuanom no…woama 144000 mu biara anya awo foforo a ɛde no kɔ ɔsoro anidaso mu…144000 Honhom fam anuanom anya honhom awo foforo”–Ɔwɛn Aban February 15, 1998 kratafa 13 Continue reading “Wobehu Onyankopɔn Ahenni?”
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 21, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags 144000 Kuw a Wɔasra wɔn, Nkwagye, Paradise ne Ahenni no
Hena ne Nnipa 144000 no?
“Hena ne saa 144000? “…wɔyɛ Yesu Kristo akyidifo anokwafo a wɔapaw wɔn sɛ wɔnkɔdi hene wɔ ɔsoro. ….Efi Asomafo no bere so no, Onyankopɔn akɔso apaw Kristofo anokwafo ama woanya nnipa dodow 144000 no”-Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa?, 2005, kratafa 78-79. Continue reading “Hena ne Nnipa 144000 no?”
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 20, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags 144000 Kuw a Wɔasra wɔn
Wodi Yehowa Ni?
“Obiara a ɔde Yesu din di dwuma wɔ ne som mu, nanso ɔmmfa nidi kɛse mma Yehowa no mfa ɔdɔ kann a ɛsɛ hann no nni dwuma”-Ɔwɛn Aban August 1991, kr. 9
“Nanso wɔ afe 1984 Nnwom nhoma mu no, Yehowa nyae nidi mmɔho anan wɔ nnwomto mu kyɛn Yesu”-Adiyisɛm N’awiei
Abɛn kratafa 36 Continue reading “Wodi Yehowa Ni?”
Author WebmasterPosted on February 20, 2013 February 20, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Nipakō Yesu Kristo yɛ, Nkwagye, Nyankopɔn Baasakoro No, Som Yesu, Woredɔ Yehowa
So w’abrabɔ yɛ nea ɛfata Daa Nkwa?
.: So w’abrabɔ yɛ nea ɛfata Daa Nkwa?
“Yɛn mu biara nni hɔ a ɔbɛfata Onyankopɔn Akyɛde na mpo wɔayɛ ade ketewaa bi ma woafata nkwa Akyɛde. Nanso, yebetumi akyerɛ sɛ yɛfata daa nkwa akyɛde denam,… yɛnhoso a yebehyira ama Yehowa na afei yɛakyerɛ sɛ yeadi nokware ma ɛne yeahosohyira no ahyia”
– Ɔwɛn Aban August 15, 1952 kr. 485
Bere tenten bɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ nokwaredifo ansa na wobetumi anya awerɛhyem sɛ wowɔ daa nkwa?
“Wɔ afe Apem nniso no awiei no, bɔne nkekae no a etwa to ne nsunsuanso, owuo bɛyɛ nea woayi afi hɔ korakoraa…Nanso pɛyɛ a ɛsɛ sɛ yedu no kyerɛ sɛ saa nnipa no ntumi nyɛ bɔne? Dabi, efisɛ nnipa wɔwɔ pɛyɛ mu nni daa nkwa anidaso gyesɛ woadi nokware wɔ Satan Ɔbonsam ntua a etwa to no”–Asetra wɔ Atirimpɔw, 1977, kratafa 176 Continue reading “So w’abrabɔ yɛ nea ɛfata Daa Nkwa?”
Author WebmasterPosted on February 6, 2013 February 17, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Gyidi ne Nnwuma, Nkwagye, Paradise ne Ahenni no
Categories Select Category Bible Mmuae ԑkɔ ma Yehowa Adansefo Nea Wɔde Hu Nokware no Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo Nokwasԑm A Ɔwԑn Aban Asafo Mpԑ Sԑ Wohu Nsԑmmisa Wɔtaa Bisaa ne Mmoa a Wɔde ma Yehowa Adansefo Nsԑmmisa ԑkɔ ma Yehowa Adansefo Ɔsԑmpaka Woafi Yehowa Adansefo mu Wɔn a Woafi Featured Wɔn a Woafi More Wɔn a wɔnyԑ Yehowa Adansefo bio no Osuahu Yehowa Adansefo Abakɔsԑm Yehowa Adansefo Gyidi Yehowa Adansefo Ho Nsεmma Nhoma Ԑdefa yɛnho
Tammie – Adansedi No
Anna Marie – osuahu no a ama woafi Yehowa Adansefo no mu
Nea YɛYɛ – Wɔn Woafi Yehowa Adansefo mu
Enti nnipakuw kɛse a ɛwɔ adiyisɛm no wɔ asase so bere a Harmagedon bɛpae agu?